Xisbiyada Siyaasadeed ee Dalka oo ku kulmay Muqdisho (WARSAXAAFADEED) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 1 May 2019
Muqdisho (Mareeg News)— Xisbiyada Siyaasadeed ee Dalka ayaa maanta si wadajir ah ugu kulmay Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Xisbiyada ayaa kulankooda uga hadlay arimo la xiriira dhameystirka hanaanka Dastuurka. doorashooyinka 2020, nidaamka xisbiyada badan, iyo ilaalinta xoriyadaha dastuuriga ah.
Hoos ka akhriso bayaanka ka soo baxay Xisbiyadan Siyaasadeed
Maanta oo taariikhdu tahay , May 2019, waxa rnagaalada Muqdishu ku kulmay hogaarniyayaasha xisbiyada NDP, Himilo Qaran, Ilays, Wadajir, iyo UPD. Xisbiyadu waxay si qoto dheer diiradda u saareen amniga qaranka, dhamaystirka dastuurka, doorashooyinka 2020, nidaamka xisbiyada badan, iyo ilaalinta xoriyadaha dastuuriga ah. Xisbiyadu waxay ku baaqayaan:
In dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu ay Isla fahrnaan istiraatiijiyad iyo qorshe amni qaran oo dalka lagu xasilinayo, laguna dhisayo ciidamo qaran oo awood u yeesha in ay mas’uuliyadda amniga dalka la wareegaan.
In dawladda dhexe ay gacan ka siiso dawlad goboleedyadu xoraynta dhulka kooxaha argagixisada ah gacantooda ku jira lagana siiyo qoondooyin saanadda iyo hubka dawladda dhexe loogu deeqo.
C In maqaarnka caasirnadda sida ugu dhaqasaha badan go’aan lags gaaro, gobolka BanaadIrna loo dhiso maarnul dadkiisu soo doortaan oo la wareega sugida amaanka gobolka.
In amniga dalka Iskaashi buuxa ay ka yeeshaan dawladda dhexe, dawlad goboleedyadu, shacabka Soornaaliyeed iyo dawladaha Soomaaliya . taageera dhinaca amniga.
In sida ugu dhaqsaha badan loo soo afmeero waxyaalaha u baahan in go’aan siyaasadeed iyo wadaxaajood ay ka gaaraan saarnileyda siyaasadeed sida maamul goboleedyadu, dawlada dhexe lyo xisbiyaddu.
In ka qeybgalka wadatashiga dastuurka kaalin muhiim ah laga siiyo xisbiyadda siyaasadeed ee heer qaran si taasi u horseeddo xoojinta nidaarn dimograadi ah oo ku dhisan axsaabta badan.
In dawlada dhexe iyo maarnul goboleedyadu ka heshiiyaan waxyaalaha muhiimka u ah dhameystirka dastuurka sida qeybsiga kheyraadka iyo federaalaynta nidaamka maamulka rnaaliyada. iwm.
In lags dheeraado in dastuurka lags dhigo mid cid ama shakhsiyaad dano guar ah leh ay ku jaangooyaan damacooda iyo danahooda gaarka ah.
In chb loo billaabo wadahadalka Somaliland iyo Dawladda Dhexe rnaadaarna ay tani muhiim u tahay dharnmaystirka dastuurka iyo midnimada dalka.
In doorashada lagu qabto waqtigii loo asteeyay lagana fogaado muddo kordhin ama wax .sta oo sababi kara in uu dib u dhac ku yirnaado geedi -socodka dimoqraadiyada dalka.
In doorashooyinka ay ku tartamaan xisbiyo qaran oo dhiirigeliya loolan ku dhisan afkaar xor ah & barnaamijyo siyaasadeed.
In xisbiyadu xafiisyo ka furtaan deegaan doorasho kasta oo ay si xor ah u cabbiraan afkaartooda mar kasta iyo meet kasta si waafqasan dastuuraka iyo shuruucda dalka u yaal.
In la dhamaystiro shuruucda ku xeeran qabsoornidda doorashooyinka si loo hubiyo in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah.
In sida ugu dhaqsaha badan looga heshiiyo nooca doorashada la geli doono 2020/2021 0 looga baaqsado mugdi ku yimaada hanaanka geeddi-socodka doorashooyinka ayadoo xisbiyada qaran ay qeyb ka yihiin go’aan gaaridda.
In mudnaan la siiyo muhimmadda ay leedahay dhexdhexaadnimada Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo kartidooda ku aadan qabashada doorasho hufan oo ay xisbiyo badan ku tartamaan.
In golayaasha go’aanada rnasiiriga ah ee dalka iyo dadka taabanaya lagu gaarayo ay qeyb ka ahaadaan xisbiyada qaran oo kaalin muhiirn ah kaga jira xoogagga siyaasadeed ee dalka.
In Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ) sida ugu dhaqsaha badan ay u guda-galaan diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada soo buuxiya shuruudaha diiwaangelinta rasmiga ah.
In dib loo eego Sharciga Xisbiyada Siyaasadda si loo waafajiyo Sharciga Doorashooyinka ee xukuurnadda lags sugayo in ay Baarlamaanka hor keento.
Xorriyadaha Dastuuriga Ah
In loo hogaansamo sareynta Sharciga lava dhowrro damaanad qaadka dastuuriga ah ee ku aadan xoriyadaha iyo xuquuqda aadamaha.
In saaxada siyaasadda Soomaaliya la furfuro oo lags dheeraado caburinta siyaasiyiinta fikirkooda ka dhiibanaya xaaladaha siyaasadeed ee dalka.
In loo ogolaado bulshada rayidka ah in ay si madaxbanaan u gutaan waajibaadkooda ku aadan toosinta iyo talo bixinta xaaladda dalka.
In saxaafada loo fududeeyo gudashada waajibaadkooda ku aadan in ay ummada usoo tebiyaan dhacdooyinka siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha fikirka dadka ku loolamaya saaxadda siyaasada.
In la xurmeeyo laga hubiyo xaqa muwaadiniintu u leeyihiin cabbirida rayigooda iyo in ay isu imaan karaan, geli karaan una ololeyn karaan xisbi, qadiyad ama fakar siyaasadeed oo waafaqsan shuruucda dalka.
Xisbiyaddu waxay dhiiri gelinayaan qabsoomidda kulanka Garoweee dhex marl donna Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxweynayaasha Dawlad Goboleedyada.
Xisbiyaddu waxay rajeynayaan in kulanka ay ka soo bixi doonaan go’aano wax ka tara geedi socodka dimoqraadiyadda dalka iyo xasilinta dawladinimada Soomaaliya.